Xul, Xulasho iyo Xusid | HIGIL
Posted on Arbaca, Juunyo 5, 2013 by Jidhidhico	2 Faallo
Marar kala duwan ayaan maansooyin dareen daltinnimeed xambaarsan u tebiyey Soomaalida reer Boston, oo mararkaas isugu soo baxday xusidda 26ka Juun iyo 1-da Luulyo. Xagaagii 2009a waxaan xushay geeraarka “Kaana siib, kanna saar”; 2010a jiiftada “Dadka waw gu’ weynnahay”; 2011a gabayga “Kontonguuro”; 2012na gabayga “Qayblibaax.” Duunkayga, waxaan maansoooyinkaas u doortay inay yihiin kuwo xul ah oo mudan in dhiigga lagu dhaqaajiyo, dhan dhaqan iyo dhan daltinnimo ba, bulsho Soomaaliyeed oo isu timid. Cidna gacan iguma siinnin xulashadayda; qofna iima yeedhin maansada aan xulan lahaa. Ma diideen gacan-siin, oo waaban ku rayn lahaa, balse qofna ka ma helin taas. Marka, haddii laygu qoonsaday xulashadayda ma anaa gardarrooday?
Axmed* waxa uu ka mid ahaa bulshadii intaas oo maanso iga dhageysatay. Dabayaaqadii sanadka 2012a, mar aan awowgay la fadhiyey madal uu meher ka qabsoomayey ayuu Axmed nagu soo baydhay, waxa uuna awowgay ku bariidshay, nuxur ahaan: Ninkani ina Cabdille Xasan uun buu gabayadiisa xafidaa, iyo Qayblibaax e, weydii bal inuu kuwii Qawdhan wax ka hayo! Awowgay intuu igu soo jeestay ayuu igu yiri, “Waad fiicantahay!” Jacdaas ayaan moodayey inuu Axmed ku hakan doono. Hasayeeshee, mar kale oo aan maqaaxi ku kulannay ayaan si hoose isu waraysannay; markanna Qawdhan buu ila gaadhay. Waxaan dhugsiiyey in aysan hal-abuurradu ii kala sokaynin, balse gabayada aan ugu jecelahay uu awowgay Axmed aw-Aadan leeyahay, waxa uuna ku gaabsaday, nuxur ahaan: Horta Qawdhan wax baan isku nahay, saas baan magaciisa kaaga la hadhi waayey.
Marka aan maanso dadweynaha u soo xulayo waxaan eegaa waxyaalaha ay ka koobantahay, mana u eego magacweynida amma qofnimada qofka tiriyay. Waxaan iswaafajiyaa dabuubta maansada iyo ta’ madasha. Waxtaransiga maansooyinkanu u leeyihiin dhallinta ayaan tixgeliyaa. Intaa waxaa dheer, dookha igu beeran ee aan wax ku xusho. Qodobaddaas oo dhan oo aan muuqannin, muuqanna karin, haddii la igu qasbo inaan muujiyo—si aan u xoojiyo maangalnimada xulashadayda—waxaa keeni kara uun qoonsi qiil la’ oo aan ka qiiroonayo maanta. Inta badan la isma arkee, marka qudhaata ee la isku yimaaddo haddii la isla wadaago murti Soomaaliyeed, tay doonto ha noqotee inta ammintu dayso, maxaa hadal ka keenaya?
Waxaa hadal ka keenaya, baa loo male badan yahay, iyada oo ay baahdey cuqdadda ku salaysan qabyaaladda, markaas na uu qof waliba oo cuqdaddan qabaa ku mabay koolkoolinta suugaanta inta la magac- amma gobal-sheegata. Weedhani Axmed igama qabato, oo dhab ahaan anigu sidaas qaawan Axmed uma toogteen inkasta oo uu igula taliyey in aan maanso u xusho magaca qofka ee tiriyey! Balse waxa aan malaynayaa inuu Axmed aniga igu riixay weedhaas badhtankeeda, maaddaama oo uu hadal xajiimaysan oo aan meesha qabannin ku sadheeyay murti Soomaaliyeed oo xulkayga ah. Haddaba, anigu waxaan taas u arkaa gardarrada ugu weyn ee qofi ku kaco!
Waxaa se xusid mudan marka la isbarto, ee hoos loo wada hadlo, in ay xurguf oo dhammi (waxay doonto ha ku salaysnaatee) meesha ka baxdo. In yar baan kaga sigtay inuu Axmed cadaawad dawdaran ii qaado, sida dadka qaarkii (idinkama qarsoonee) ay cadaawaddaas mid ka daran ugu qaadeen Axmed Faarax Cali (Idaajaa)—suugaan-jeedintiisa awgeed! Balse, Eebbe waxa uu qaddaray inaan wada fadhiisanno Axmed, oo aan hadalka isu dhiib-dhiibno, sidaasna ku kala nafisno. Waxa uuna wada-hadalkaasi ii wacay inaan sii xoojiyo baadi-goobiddayda suugaanta dumarka Soomaaliyeed, oo aan ku raja-weynahay inaan Soomaalida reer Boston sanadkan la wadaago.
* Magiicisa rumaad ma’aha Axmed.
Xig: Dhaqanbile ka Heeshi
Previous post ← Gura-yare Dameerkaygow!
Next post Kowda Luulyo 2013 →
2 thoughts on “Xul, Xulasho iyo Xusid”
Yassin Cagaweyne says:
Talaada, Luulyo 16, 2013 5:59 B
Masha Allah, Ilaahay waxuu kugu galadeysatay curinta dhigaal dhameystiran. Alle waxaan ka bariney kuwo badan oo adiga iyo Idaajaa oo kale ah, soona nooleeya askeena Soomaaliga. Aamin aamiin
Arbaca, Luulyo 17, 2013 12:22 B
Mahadsanid Walaal. Ramadaan wacan.